Aprovel®(အေပရိုဗယ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Aprovel®(အေပရိုဗယ်)
Aprovel (အေပရိုဗယ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Aprovel®(အေပရိုဗယ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Aprovel (အေပရိုဗယ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Aprovel ကို သွေးတိုးရောဂါ နှင့် ဆီးချိုလူနာများမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ သွေးတိုးရောဂါကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျောက်ကပ်ရောဂါမှာ အများဆုံး အသုံးပြု ပါတယ်။
Aprovel ကို အခြားသောရောဂါတွေမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆက်လက်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Aprovel (အေပရိုဗယ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးပြားတွေကို အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း၊ ချိုးဖဲ့ခြင်း (သို့) ဝါးစားခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ရေ ၁ ခွက်အပြည့်ဖြင့် Aprovel ကိုသောက်သုံးပါ။
ဆေးအသုံးပြုပုံကို ဆက်လက်သိရှိလိုပါက သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးပါ။
Aprovel (အေပရိုဗယ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Aprovel ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိုးအောင် နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင် သိမ်းဆည်းတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ Aprovel ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Aprovel ဆေးအမျိုးအစားနဲ့ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှု ပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ အကုန်လုံးကို ကလေးတွေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားပါ။
Aprovel ကို အိမ်သာထဲပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်ကနေ ဆေးကို ပစ်ချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့တဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရဲ့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Aprovel (အေပရိုဗယ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များရှိရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Aprovel ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများ (သို့) အခြားသောဆေးဝါး များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အခြားသော ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ဥပမာ အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ တာရှည်ခံဆေး (သို့) တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Aprovel (အေပရိုဗယ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် ပထမ ၃ လတွင် C အဆင့်နှင့် ဒုတိယ ၃ လနှင့် တတိယ ၃ လတွင် D အဆင့်ရှိသည် လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
D=ဆိုးကျိုးများရှိသည့် အထောက်အထားများ ရှိပါသည်။
နို့တိုက်နေတဲ့ ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ဆိုးကျိုးများ ရှိပါတယ်။ ကလေးနို့တိုက်နေစဉ်တွင် ဆေးကို ဖြတ်ထားပါ။ (သို့) ကလေးကို နို့မတိုက်ပါနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေရင် Aprovel ကို မသောက်သုံးခင် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနဲ့ အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Aprovel (အေပရိုဗယ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Aprovel ကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးတွင်း creatine kinase ပမာဏများလာခြင်း
ကြွက်သားနှင့် အရိုးများ နာကျင်ခြင်း
ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ထားသော ဆီးချိုလူနာများတွင် သွေးတွင်း ပိုတက်ဆီယမ် ပမာဏများလာခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Aprovel (အေပရိုဗယ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Aprovel ဟာ သင်အခု လောလောဆယ်ဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မလိုးလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားပဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အေပရိုဗယ် ( Aprovel ) နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့
ဆီးဆေးများ (ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်ကို မဆုံးရှုံးစေအောင်ပြုလုပ်ထားသော ဆီးဆေးများ)
အက်စ်ပရင် (Aspirin) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Aprovel (အေပရိုဗယ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Aprovel က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင် ဆေးမသောက်မီကတည်းက အစားအသောက် (သို့) အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေ ရှိမရှိကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Aprovel (အေပရိုဗယ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Aprovel ဟာ သင့်ရဲ့နဂို ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ဓါတ်မတည့်ရောဂါ Angioedema ရာဇဝင်ရှိခြင်း (သို့) သွေးတိုးကျဆေး ၁ မျိုးဖြစ်တဲ့ ACE Inhibitor (ဥပမာ – lisinopril) ကြောင့် Angioedema ဖြစ်ခြင်း (Angioedema ဆိုတာ ရောဂါလက္ခဏာစုပါ။ လက်၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ မျက်လုံး၊ လည်ချောင်း (သို့) လျှာတွေ ရောင်ရမ်းလာခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစာမျိုရခက်ခဲခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်းတို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
နှလုံးရောဂါရှိခြင်း (ဥပမာ – နှလုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကျဆင်းခြင်း)
လေဖြတ်ခြင်း (သို့) မကြာသေးမီက နှလုံးကြွက်သားပုပ်ခြင်း စသော ရောဂါရာဇဝင်ရှိခြင်း
သွေးတွင်း electrolyte ဓါတ် ပမာဏအနည်းအများ ဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ – သွေးတွင်း ပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏ များခြင်း၊ သွေးတွင်း ဆိုဒီယမ်ပမာဏ နည်းခြင်း)
ဆားဓါတ် (ဆိုဒီယမ်) နည်း ဓါတ်စာစားနေရခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Aprovel (အေပရိုဗယ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ
စစချင်းမှာ နေ့စဉ် ၁၅၀ မီလီဂရမ် ကို ၁ ကြိမ် သောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လာရင် နေ့စဉ် ပြင်းအား ၃၀၀ မီလီဂရမ် ၁ ကြိမ် ထိတိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော သွေးတိုးကျဆေးတွေကို ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိခဲ့ရင် စစချင်းမှာ နေ့စဉ် ၁၅၀ မီလီဂရမ် ကို ၁ ကြိမ် သောက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ နေ့စဉ် ပြင်းအား ၃၀၀ မီလီဂရမ် ၁ ကြိမ်နဲ့ ထိန်းသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Aprovel (အေပရိုဗယ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများအတွက် သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားကို သက်သေပြထားခြင်း မရှိပါ။ သင့်ရဲ့ကလေးအတွက် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။ မသုံးစွဲခင်မှာ ဆေးရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆက်လက်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများကို သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Aprovel (အေပရိုဗယ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Aprovel ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံ အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြားပုံစံ ပြင်းအား ၁၅၀ မီလီဂရမ်
ဆေးပြားပုံစံ ပြင်းအား ၃၀၀ မီလီဂရမ်
အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ သင်သောက်သုံးနေတဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားထားသော ဆေးအားလုံးရဲ့ စာရင်းကို သင့်နှင့်အတူ ယူဆောင်သွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Aprovel ကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမယ့် အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Aprovel. http://www.mims.co.uk/drugs/cardiovascular-system/hypertension/aprovel. Accessed October
Aprovel. https://www.drugs.com/cdi/irbesartan.html. Accessed October 31, 2016.Aprovel. http://www.mims.co.uk/drugs/cardiovascular-system/hypertension/aprovel. Accessed October
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇွန် 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 4, 2017
သွေးတိုးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းသောအယူအဆ ၅ ချက်
ကျွန်တော် သွေးတိုး ဖြစ်နိုင်သလား